Archives tag: lg
Dom » Entries tagged with "lg"
Ny tatitra rehetra izay niseho tamin'ny haino aman-jery farany teo dia nivadika ho marina. Vao avy nanambara ny solontenan'ny LG fa nisy ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny fandaozana ny famokarana smartphone. Ny departemanta finday dia nitondra goavambe ...
CES 2021 - Konferansa LG tao anatin'ny 9 minitra
CES, ireo 2021, lg
Miverina ny CES! Amin'ny endrika miova, saingy mbola! Faly be izahay fa niverina teto aminay ny fiandohan'ny taona ny fampirantiana elektronika mpanjifa lehibe indrindra eran-tany ary mampiseho teknolojia vaovao. Hanomboka ny andian-dahatsoratra miaraka amin'i LG izahay! LG ...